Maso ditsoka… andramo ity
Mamerina amin’ny laoniny ny hoditra miroraka
Fomba iray afaka amonoana moka
Zavatra ilaina: Ø Rano mafana 200 ml Ø Siramamy 50g(maty foana na fotsy na mena) Ø Levure boulangerie 1 g Ø Tavoahangy(plastika) Ø Sotro
Mamotsy nify amin’ny hoditr’akondro
Zavatra ilaina Ø Borosy nify Ø Dentifrice Ø Hoditra akondro
Fanalana ny fofona amin’ny kiraro
Zavatra ilaina: Sira Ny zavatra atao: 1. Fafazo vaingan-tsira ao anatin’ny kiraro. 2. Avelao hijanona ao mandritra ny alina tontolo. 3. Esory ao anatin’ilay kiraro ilay sira ny ampitson’iny dia ho hitanao fa iala ilay fofona.
WRAP akoho sy legioma by Mihanta
Akora ilaina Tortillas (any amin’ny tsena lehibe) 4 Nofon-kenan’akoho (blanc de poulet) efa masaka didiny 4 Fraomazy malemy (Vache qui rit na Carré frais …) 120 g Karaoty voakiky 50g Kaokaombra ¼ Ravin-tsalady Saosy vinaingitra 5 santilitatra Sira
Kiraro tery, tsembon-tongotra… paika 5 manavotra
Kojakoja manandanja amintsika vehivavy ny kiraro, satria mamoaka ny hatsaran’ny paozy sy ny akanjo. Indraindray anefa izy ireny manahirana sady mampijaly antsika. Ireto misy vahaolana vitsivitsy mety hanavotra :
Zazakely voan’ny sery, tsentsina ny orony… izao atao Ny atao:
Ø Potserina ny hasina tongolo gasy 2 na 3. Ø Arotsaka anaty rano mangotraka iray tasy. Ø Omena ny zaza tsikelikely mandra-pisindan’ilay tsentsina amin’ny orona.
Manindrona, manitikitika, manelingelina ny maso rehefa ditsoka. Marihina fa tsy azo kosehina mihitsy ny maso raha sendra ditsoka. Raha tsy misy mandaitra mihitsy ireo fomba fanalana izany dia andramo ity fomba iray ity.
Ny atao :
· Maka silaka mofo ary lomana anaty ronono.
· Rehefa vonton’ny ronono ilay mofo dia apetapetaka eo ambonin’ny hodi-maso mikipy izany.
· Avela eo mandritra ny minitra vitsy izany ka rehefa miiratra dia ho afaka ho azy ilay vovoka nanditsoka.
· Azo atao ihany koa ny manolo ilay silaka mofo amin’ny fonosana dite fanao “infusion”.